Nagarik Shukrabar - औँठीमा धोका !
बुधबार, ०८ जेठ २०७६, ०१ : २२
आइतबार, ०८ बैशाख २०७६, ०७ : ५९ | शुक्रवार
यस्तोमा दुलाहालाई कम्ता दबाब हुँदैन ! बिहेमा जति महँगो औँठी ल्यायो, उति सुखी वैवाहिक जीवन बिताउन पाइन्छ भन्ने लोभ पनि दुलाहामा हुन्छ । त्यसैले दुलहीका लागि उसले ऋणमै किन नपरोस्, महँगै औँठी किन्ने गर्छ ।
हालै एक जना महिलाले एउटा अमेरिकी अखबारमा कोलम लेखिका नताली बेन्सिभेन्जासँग अनौठो गुनासो गरिन् । दुलहीको भनाइ थियो, बिहेको छेक पारेर उनका प्रेमीले नक्कली औँठी उपहारमा दिए । यो कुराको खुलासा भने दुलाहाले जुन ठाउँमा आँैठी किनेका थिए, त्यहाँका पसलेले गरेका हुन् ।
‘साह्रै राम्रो औँठी बनाउनु भएछ,’ धन्यवाद दिन गएकी ती दुलहीले पसलेलाई धन्यवादको शैलीमा भनिन् तर जवाफमा पसलेले भने, ‘तपाईंलाई भ्रम भएको होला, हामीले यो बनाएका होइनौँ । यो त किनुवा औँठी हो, यसको खासै मूल्य छैन ।’
अखबारमा गुनासो गर्दै दुलहीले लेखेकी छन्, ‘पसलेको त्यस्तो प्रतिक्रियापछि मलाई कस्तो भयो होला सोच्नु त ! मेरो हुनेवाला दुलाहाले यस्तो गर्ला भन्ने कल्पनासमेत गरेकी थिइनँ ।’
यसपछि उनले भावि दुलाहासँग औँठीबारे कुरा गर्दा दुलाहाले भनेछन्, ‘हेर, यत्रो ठूलो औँठी दिने मेरो हैसियत छैन तर मुख्य कुरा त औँठीभन्दा मेरो प्यार ठूलो कुरा हो नि !’
भावि दुलाहाले थपेछन्, ‘हेर प्यारी, तिम्रो यो औँठी नक्कली हो कि सक्कली तिमी र मबाहेक अरु कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । त्यसैले यसबारे धेरै चिन्ता नलेऊ र नदेऊ पनि ।’
भावि दुलहीले गुनासोपत्र लेख्दै भनेकी छन्, ‘केटोले मलाई अझै बुझ्न चाहेन । म यो कुरामा चिन्तित किन थिएँ भने मलाई उसले धोका दियो । सुरुमै मैले त्यत्रो महँगो उपहार दिन सक्तिनँ, म नक्कली नै उपहारमा दिन्छु भनेको भए सक्किगाको थियो नि ! तर मैले बाहिरबाट यो कुरा थाहा पाउनु भनेको त ऊ विश्वासयोग्य रहेन भन्ने नै लाग्यो ।’
पछि सुझाव दिने क्रममा नतालीले दुलहीलाई भनेकी छन्, ‘तिमी यस्तो सम्बन्धलाई अघि नबढाऊ । सुखद् जीवनको कल्पनामा अघि बढेको पहिलो पाइला नै यसरी धोकाको पाइला हुन्छ भने आउँदा दिन झन् कस्तो हुन्छ होला ?’
नतालीको सुझावपछि ती युवतीले सुझावका लागि धन्यवाद दिँदै वैवाहिक समारोह रद्द गरेको बताइएको छ ।